धेरै तनाव लिँदा आँखा कमजोर हुने खतरा, कसरी बच्ने ? – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक १३ गते ९:३७
पछिल्लो समय तनाव आमसमस्या बन्दै आएको छ । यदि तपाईं पनि बढी तनावमा रहनुहुन्छ भने तपाईंको आँखा कमजोर हुने अत्यधिक सम्भावना छ । जर्मनीको मैग्डेबर्ग आटो वाँन गुरिके युनिभर्सिटीको अध्ययनले निरन्तर तनाव लिँदा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको असन्तुलनका कारण आँखा र मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
पुरानो तानवका कारण लामो समयसम्म भावनात्मक दबाबको सामना गर्नुपर्छ, जसमा व्यक्ति लागिपरेको हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति तनाव हुँदा फरक–फरक तरिकाले प्रतिक्रिया दिने गर्छन् ।
तनावले शरीरमा हर्मोनको स्तर बढाउँछ
विशेषज्ञका अनुसार शरीरको तनाव प्रतिक्रियाप्रणाली आत्मसीमित हुने गर्छ । तनावका कारण शरीरमा हर्मोनको स्तर बढ्छ र अनुमानित खतरा घटेपछि सामान्य हुँदै जान्छ । जसले एड्रेनलाइन र कोर्टिसोलको स्तर घटाउँछ, जसका कारण मुटुको धडकन बढ्ने र रक्तचापको बेसलाइनस्तर फर्किएर आउने हुन्छ । अन्य सिस्टम नियमित गतिविधिका साथ पुनः सुरु हुने गर्छ ।
निरन्तर तनावको अवस्थामा व्यक्ति लगातार रूपमा मानसिक तथा शारीरिक लडाइँको प्रतिक्रिया गर्न पछि पर्दैन । तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सक्रियता देखाउने वा कोर्टिसोल र अन्य तनाव हर्मोनको ओभर एक्स्पोजर तथा शरीरमा लगभग सबै प्रतिक्रिया गर्ने गर्छ । यस प्रकारका व्यक्ति विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने गर्छन् । यसले स्वास्थ्यमा चिन्ता, प्राचन प्रणालीमा समस्या, मुटुरोग, अनिद्रा, तौल बढ्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या हुनेलगायत समस्या निम्तिन्छन् ।
तनाव कम गर्ने उपाय
१. मद्यपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्नुहोस् वा कम गर्नुहोस् । यसको सेवनले तपाईंलाई उत्तेजित बनाउनुका साथै तनावको स्तर बढाउन मद्दत गर्छ ।
२. दैनिक साधारणतया ३० मिनेट व्यायाम गर्नुहोस् । यसले तपाईंलाई फिट राख्नुका साथै तनाव पनि कम गराउँछ ।
३. स्वस्थ खानेकुरा तथा फलफूल, ताजा तरकारीको सेवन गर्नुहोस् । फलमा उपलब्ध हुने एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ ।
४. कमसेकम दैनिक ७–८ घण्टा सुत्ने गर्नुहोस् । यसबाट तनावमा केही कमी आउँछ ।
५. समय राम्रोसँग निर्धारण गर्नुहोस् । धेरै काम आफ्नो भागमा मात्र नलिनुहोस्, दोस्रो व्यक्तिका लागि पनि दिनुहोस् । कुनै समय आराम पनि लिने गर्नुहोस् । यसले तनावलाई केही हदसम्म घटाउँछ ।